Ciidamada booliska Boosaaso oo gacanta kusoo dhigay ninkii dilay gudoomiye kuxigeenkii hore ee magaalada
arlaadi August 8, 2017 No Comments
Ciidamada Booliiska gobolka Bari ayaa xalay gacanta kusoo dhigay Ninkii dilay gudoomiyihii hore ee gobolka Khadar Ismaaciil Cabdulle oo xalay fiidkii lagu dilay magaalada Bosaso, lama garanayo sababta loo dilay marxuumka .
Korneyl Cabdixakiin Yuusuf Xuseen taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay inay gacanta kusoo dhigeen Ninkii dilay Marxuum Khadar Ismaaciil, wax faah faahin ah kama bixin Ninkan ay soo qabteen ciidamadu iyo wuxuu yahay.
Lama garanayo Ninkaan inuu yahay Al-shabaab iyo cid kale, balse wararka qaarkood ayaa sheegaya in Ninkan Odayaasha beeshiisa ay ciidamada amaanka u gacan galiyeen.
Dilka Gudoomiyihii hore gobolka Bari Marxuum Khadar ayaa kusoo aadaysa xilli magaalada Bosaso ay ka taagan tahay xaalad xasaasi ah oo ku aadan mudaharaadyo ay dhigayaand dadweynuhu kusoo oo ka cabanayey kala sooca lacagta Soomaaliga iyo sare ukaca doolarka.
Waxaa maalmahan xirna inta badan goobaha ganacsiga magaalada Bosaso.